Izixhobo zaseShanghai Kungcono nje Co., Ltd yasekwa ngo-2010 kwaye yaphangwa ngo-NO. 328 YangYue, iYangWang Industral Park, isithili saseFengXian, eShanghai, China.
Izixhobo ezingcono nje zidibene nophuhliso, ukuvelisa, iSebe lokuthengisa, Sichonga uluhlu olupheleleyo lwezixhobo zeDent, izixhobo ezizenzekelayo kunye neemveliso ezinxulumene noko. Iimveliso zethu kumazwe angaphandle ukuba ngokupheleleyo kwikona nganye yehlabathi.
Izixhobo ezilunge ngakumbi zihlala zinamathela kwimotto ngokuthi "phila ngomgangatho ophezulu, ukhule ngokusebenzisa izibonelelo." Sinamandla okuchwetheza kwiklasi yoku-1, umgca wemveliso kunye nobunjineli bemveliso efanelekileyo kunye nenkqubo yokuqinisekisa esemgangathweni nesulungekileyo.
Izixhobo ezingcono nje zazinikezelwa kakhulu ngabathengi ekhaya nakwamanye amazwe ngenxa yelizwi elilungileyo lomlomo kunye namakhredithi aphezulu, ahlala encamathela kumgaqo-nkqubo "njengozinzo oluzinzileyo kunye nokomeleza, ukuzalisekiswa kweemfuno zabathengi, ukuzithemba okungagungqiyo, abathengi ' ukuphucula ukoneliseka. " Sisoloko sikwinkonzo yakho kwaye silindele uqhakamshelwano lwakho.
phumelela ngomgangatho olungileyo, ukufezekiswa kwemfuno zabathengi, uguquko oluzinzileyo, ukuphela kokungafezeki.
jonga umlinganiso wokupasa umgangatho weemveliso uhlala u-99% kunye nomhla wokuhanjiswa ukuze ube yi-100% ngokweshedyuli.
Uhlobo lwehlabathi luxhaswa yinkcubeko. Siyiqonda ngokupheleleyo inkcubeko yakhe yokudibanisa inokwenziwa kuphela ngeempembelelo, ukungena kunye nokudityaniswa. Ukuphuhliswa kweqela lethu kuxhaswe ngamaxabiso asisiseko kule minyaka idlulileyo -------Ukunyaniseka, ubuGcisa, uxanduva, ukusebenzisana.
-Uphando kunye nenkxaso yokubonisana. inkonzo yobunjineli yokuthengisa inye-ukuya-kwenye.
-Iwaranti yonyaka omnye. Nika inkxaso yobuchwephesha simahla kubo bonke ubomi beemveliso.
-Gcina ubomi bonke unxibelelana nabathengi, fumana ingxelo ngokusetyenziswa kwezixhobo kwaye wenze umgangatho weemveliso uqhubeke ugqibelele.